China Umatshini wokupeyinta iiplip ezantsi nokwenziwa kweFektri I-S-conning
I-S911 Lipstick engezantsi kwesantya sokuPhawula umatshini
I-S911 ngumsebenzi oguqukayo wokuvelisa izithambiso ngokukodwa kwi-lick-stick kunye nelebheli yebhalsamu, lo matshini wokulebhelisha onesantya esiphezulu ngumncedisi onamandla wokuphucula imveliso enkulu.
Umatshini wonke ulawulwa yikhompyuter, iibhombu zesithembiso sokuzingela ngokuzenzekelayo kunye neleyibhile ngokulandelelana, kwaye izixhobo zinokuxhotyiswa ngomatshini oshushu oshicilelayo
· Ukwamkela inkqubo yesantya esiphezulu yenjini ye-servo.
-Isebenziseka kwiintlobo ezahlukeneyo zekhuni yokubhalwa kwebhokisi.
Isantya esizinzileyo: 0-250 iiPC / ngomzuzu;
Inkqubo yokuphawula ngokuchaneka okuphezulu, eneelebheli zokunyamezelana ± 1mm;
-Ulungiso oluzenzekelayo lwendlela yokuhambelana kwetyathanga ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwezinto okuzinzileyo kunye nendawo echanekileyo;
-Ilebeler epheleleyo yamkela i-SUS304 insimbi engenasici kunye ne-A6061
I-S911 nayo ilipstick Production Line iphambili ilungele amayeza, iikhemikhali zemihla ngemihla, imveliso yokhathalelo lomntu, ishishini lokutya, izithambiso njl njl isikhongozeli sesilinda okanye encinci isikhongozeli esingqukuva somhlaba esijikeleze iilebheli, Umatshini wokuPhawula ngebhotile ojikeleze umatshini ngokuzenzekelayo.
Izikhongozeli ezijikelezileyo (ezinje ngeebhotile ezijikelezileyo, ilipstick, iingqayi, kunye neekomityi) zibekwa ngokuthe nkqo kwizigudla kwaye umqhubi wenziwe ngokutshintsha kwesandla. Iiroli zijika ibhotile njengoko ilebheli isetyenziswe ngokuchanekileyo kwibhotile. Umatshini uqhutywa ngombane ngombane wombane wekhowudi yokuchaneka ngokuchaneka okuphezulu. Umatshini unakho ukulungela ubungakanani obahlukileyo belebheli kunye nezikhongozeli ezijikeleze umatshini.Umatshini unokwenza ngokusesikweni ngokutshintsha kweenyawo kunye nangokomthengi ufuna.
Ubukhulu (L) 2400 x (W) 1206x (H) 1800mm
Ubungakanani besikhongozeli (H) 10-280mm (W) 50-340mm
Egqithileyo Isantya esiphezulu sokwenza ibhokisi ngokuzenzekelayo kunye nomgca wemveliso yegalelo
Okulandelayo: S921 Isantya esiphezulu sebhubhu ethambileyo
Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi, Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli, Umatshini wokuTywina wePlastiki, Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo, Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar,